महिला राष्ट्रपति भएको देशमा म हरेकदिन बलात्कारको समाचारमा रूनको लागी बाध्य छु »::Safal Post – Nepali Online News Portal
महिला राष्ट्रपति भएको देशमा म हरेकदिन बलात्कारको समाचारमा रूनको लागी बाध्य छु
प्रकाशित मिति : सोमवार, चैत्र ९, २०७७
भण्डारी ज्यु ! एकदमै सुरक्षित हुनुहुन्छ हामी नाबालकको के चासो उहालाइ कुनै अलि कडा कानुन बनाउन ए सरकार जस्ले बलत्कार गर्छु भनेर सोच्न नसकोस् । महिलालाइ र भर्खरका ११ महिने बालिकालाइ पनि भण्डारीलाइ जस्तै सुरक्षाबोर्ड दियोस् हैन भने लागु हुने कानुन बनाइदेउ ।
आमा दिदी बहिनी केही नभन्ने पापीलाइ केही त सजाए देउ सरकार । जस्ले हरेक मोडमा सुरक्षा दियोस् । खै के लेखम कुन शब्द लेखम अन्योलमा छु जब कि दिदी बहिनी बलत्कारीको शिकार भएको भनेर आवज उठाउदा उठाउदै कुनै क्षण आफै त्यो अबस्थामा पुग्छुकी भन्ने डर छ ।
केही समय आवज उठायो माइतिघर वरपर डुल्यो,न्यायकै पक्ष कुरेर बस्यो तर अवसोच माहोल अर्कै हुन्छ त्यहा अब कस्को पावर कुन नेतासम्म छ । यदि छ त उ यस घटनामा दोषी त के देशमा नै नरहन पनि सक्छ विदेश पलाएन अथवा अर्को ठाउ गैहाल्नि । यदि जेल परिहाल्यो भने पनि ३ दिनमा धरौटिमा छुटाइदिने, ए ! सरकार अलिकति भएपनि बुझीदेउ हामी नाबालिकाको आवज !! आज जनताका छोरीहरू हरेक क्षणबाट बचिरहन मुस्किल छ के गरिब भए भन्दैमा त्यहि कु कृति गर्नेलाइ तिमी किन जयजयकार गरिरहेछौ ? कतिदिन सम्म नातेदार प्रलोभनमा ति चेलिहरूको आशु बगाउन बाध्य बनाउछौ ? एक न एक दिन मर्नु छ तर फुल्नै नपाइ चै नमारिदेउ काल आएर नै मर्न देउ न बिन्ति चढाउछौ । लाखौ बिन्ति र अनुमति टक्र्याउदा समेत तिमी किन आखा चिम्लेर कानमा कपास कोचेर साथै मुखमा पट्टि किन टाल्छौ किन ??कहिले काही त हामी बालिकाको पनि आवज सुनिदेउ ।
तिम्रो एक नियमले बलत्कारीहरू थुरूरू काम्ने खाले बनाइदेउ न तिमी किन यति निष्ठुररी र घमण्डी भएको सरकार ! केही त हाम्रो लागी भनेर पनि बनाइदेउ कानुन ! कोही त छ मेरो साथमा भन्ने आभाष दिलाइदेउ । हामीले लाखौ-करोडौ हिसाव मागेको छैनम् वस् हाम्रो शरिरको रक्षा गर्न पाउ कलिलो फौलमा किरा लाग्न नपाओस् मात्र भन्न खोजेको हो। के तिमीलाइ तिम्रै देशको नागरिक हरेक पिडामा छ भन्ने थाहा छैन र ? राष्ट्रपति महिला अलिकति त ति कलिला बालीकालाइ कस्तो पिडा हुन्छ भन्ने त बुझिदिनुस् न । चाहे जे छ जति छ एउटा नियम थपिदिनुस् न। तपाइको एक लाइनले पुरा जनताको मुहारमा हाँसो आओस् न। आलोचनामा पनि अलिकति चासो राखिदेउ न अरूदेशका ठुल्ला ठुला ब्यक्तिसगं हात मिलाउदा राख्ने चासो जसरी ।
राष्ट्रपतिको ज्युको घरछेउमा घण्टा घण्टा गनेर बसेका सुरक्षा कर्मी जति खटिएका छन् त्यो समयको एक घण्टामा कानुन बनाइदेउ भनेर माग राखन ता कि विध्यादेवी मात्र हैन हामी सबै सुरक्षित रहन पाउ हरेक भगवानको नाम जप्दा तपाइको पनि जप्न पाउ । “पैशासगं तुलना गरेर पिडा बराबरी कहिल्यै हुदैन ।” त्यसैले धरौटीमा छाड्ने हैन कडा भन्दा कडा सजाय वा बलात्कारीलाई फाँसीको सजाय गरियोस् भनि आदेश जारी गरिदेउ न ।
जन्मदेखी मृत्यु प्रयत्न सम्म कसरी जोखीममा सुरक्षित हुने हे भगवान! हे सरकार ! कि त हामीलाइ छुट्टै राज्य बनाइदेउ यो पापीहरूबाट धेरै टाढा जान सकुम् भगवान! घटना घट्यो घर जलाइयो प्रहरीको कुटाइ र लडाइ पनि लडियो प्रहरीको गोलीबाट निर्दोष ब्यक्तिको ज्यान जान्छ हे भगवान कति लापर्वाही हे राष्टपति महिला दिजु अब त तिमीनि केही बोल न भन्या ।
तिम्रो मुखमा कसैले टाल्न त आएको छैन होला नि कि तिम्रो हरेक जनताका छोरीहरूको पिडा देख्ने आँखालाई कालो पट्टीले अझै खुलेका छैनन् ?? हामी हात जोड्छौ लाख बिन्ति गर्छौ अब त केही तडक भडक देखाउ राष्ट्रपति भएको के चुप लागेर अरू ले जे भन्छन् त्यही गरिरहेको ?? आफ्नो पदको पनि ख्याल गर र ति अबोध बालीकाहरूको पनि ! देशमा जति ठूला ठूला राजनीतिक परिवर्तन वा क्रान्ति भए वास्तवमा जनताको हित अधिकारको लागी कहिल्यैँ खास परिवर्तन भएन !
जनताको जीवन स्तर उहिँ नै रहिरह्यो । यदि कसैले परिवर्तन भयो नि भन्छ भने १/१ गरी भनोस् नत्र कञ्चपुरको १७ वर्षीय अबोध बालिका निर्मल पन्त को बलात्कार पछिको हत्या, बझाङको १२ वर्षीय सम्झनाको बलात्कार पछिको हत्या, बैतडीको १७ भगरथि भट्टको बलात्कार पछिको हत्या यहि नै हो परिवर्तन यहि हो महिलाको ३३% अधिकार कि महिलाले अधिकार बढि प्रयोग गरे भनेर खोस्दै छौ ??
समाजमा र देशमा जनताको जीवनस्तर छुने नियम कानुन जबसम्म शासकले गर्दैनन् यो भन्दा आज बढि सामाजिक विकृत बढदै जान्छन्। हाम्रा युवा दाजुभाई देशमा उचित रोजगार नहुँदा बाध्य भएर बिदेसिएका छन् तिनका पिडा दुःख कसले बुझ्ने हाम्रो देश र समाजको रक्षा गर्ने युवा बाहिर हुँदा कसरी परिकल्पना गरौं हामी सुरक्षित हुन्छौं भनेर ?? अब एकपटक फेरि महिला दिदी बहिनीहरु आफ्नो अधिकार र सुरक्षित समाज निर्माण गर्न जागरूक हुन समयले हामीलाई झकझकाई रहेको अनुभूति भएको छ। जुटै उठौ र विजयी बनौं !! त्यो समय इतिहासमा सुनौलो अक्षरले लेखिने छ।
लेखक : ललिता कार्कि ( धादिङ्ग) पशुपति बहुमुखी क्याम्पसका एक अध्ययनशील र झुझारु विद्यार्थी हुन्।